ICompressor-decompressor ye-IZArc. Uyifaka njani i-IZArc ifomathi yasimahla yeefomathi ezininzi kwaye ulibale nge-WinRar | Iindaba zeGajethi
Hkwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bendithetha ngayo icompressors kwaye kwelo nqaku wachaza ukuba yintoni icompressor kwaye yenzelwe ntoni. Ukuba ulifundile eli nqaku, uyakhumbula ukuba ikhankanye ezinye zeekhomputha ezaziwayo kodwa zahlawulwa njenge WinZip o I-Winrar Ndikhankanye ezimbini ezikhululekileyo ezinje nge 7-Zip okanye IZArc. Ewe, namhlanje siza kubona ukuba ifakwe njani le yokugqibela, i IZArc, eyiCompressor-decompressor yasimahla ngokupheleleyo eSpanish.
II-ZArc iyahambelana neWindows 98 / NT / 2000 / XP / 2003 kunye neWindows Vista. Ngaphambili le compressor yayingahambelani neWindows Vista kodwa ukusukela Inguqulelo ye-IZArc 3.8.1510 isebenza ngokugqibeleleyo kuhlobo lwe-Vista engama-32. Ke ukuba unayo nayiphi na kwezi nkqubo zokusebenza ezifakwe kwikhompyuter yakho, awuzukufuna ukuhlangabezana nazo naziphi na ezinye iimfuno ukuze ukwazi ukusebenzisa i-IZArc.
SUkuba awukasithathi isigqibo sokufaka i-IZArc, ndiza kukukhumbuza ukuba isimahla, awudingi ukuhlangabezana nazo naziphi na iimfuno ezongezelelweyo zofakelo kwaye ngaphandle kweSpanish ineelwimi ezingaphezulu kwama-40 ezikhoyo. Izarq yi-compressor eya kukunceda wenze yonke imisebenzi efunekayo yoxinzelelo kunye neefayile zakho ngaphandle kokuhlawula ipenny. Unga:
zip kwaye unzip
yenza iifayile Ukucinezela ngokwakho (ngonqakrazo nje kabini) ukuthumela kubahlobo bakho ngeposi ukuze bazivule ngaphandle kokuba kufakwe nasiphi na isiguquli esifakwe kwiikhompyuter zabo
Yahlula-hlula ifayile kwiindawo ezininzi
join Iifayile ezahlulwe zaziichunks ezininzi
uthanda encrypt iifayile zakho ezixineneyo kunye negama eligqithisiweyo ukuzikhusela ekuboneni amehlo
ukulungiswa kweefayile ezixineneyo
kunye nokuguqula iifayile phakathi kweefomathi ezahlukeneyo zoxinzelelo
BEwe, ndicinga ukuba sele uqinisekile malunga nokulunga kwe-IZArc. Ulibale malunga WinRAR kunye neWinZIP kwaye wamkela eyakho endaweni ye-IZArcKutheni uhlawula enye inkqubo xa enye isenza okufanayo simahla? Masiqale ngokufakwa kwe-IZArc:
1) Into yokuqala yokwenza ukukhuphela inkqubo. Unokukhetha ezimbini, ukusuka kwiSoftonic ngokunqakraza apha, okanye kwiwebhusayithi esemthethweni ye-IZArc. Kuzo zombini iimeko, siya kukhuphela ingxelo yenkqubo yamva nje, okwangoku 3.81.1550. Khumbula ukuba i-IZArc isimahla, ke unakho khuphela mahala kuwo nawaphi na amaphepha amabini kwaye uyisebenzise simahla. Ukufakwa kuya kwenziwa ngesiNgesi kodwa kulula kakhulu kwaye ekugqibeleni kofakelo singabeka inkqubo ngolwimi esilufunayo.
2) Xa inkqubo ikhutshiwe siza kucofa kabini kwifayile kwaye ukufakwa kwe-IZArc kuya kuqala. Kwiwindow yokuqala evelayo, basamkela ngesiNgesi ("Wellcome to the IZArc 3.81. ...") sizakucofa ku "Okulandelayo>" kwaye iwindow yokwamkelwa kwelayisensi yomsebenzisi izakuvela:
Sele uyazi ukuba ukuze usebenzise inkqubo kufuneka uvumelane neemeko ezibekwe ngabenzi bayo, ke funda iphepha-mvume (ngesiNgesi) kwaye ukuba uyavuma, jonga ukhetho "Ndiyasamkela isivumelwano" emva koko ucofe ku «Okulandelayo> ».
3) Enye iwindow iya kuvula apho kuya kufuneka ucofe ku «Okulandelayo>» kwakhona nakwifestile eza kuvulwa ngokulandelayo, cofa ku «Okulandelayo>». Uya kuza kwifestile enesihloko esithi "Khetha Imisebenzi eyongezelelweyo":
Apha unokukhetha ezimbini. Unokwenza i-icon kwi-bar ekhawulezayo yokuqalisa («Yenza i-icon yoKwazisa ngokukhawuleza») okanye yenza i icon ye-IZArc kwidesktop ("Yenza i icon yeDesktop"). Khetha iindlela onomdla kuzo ngokujonga ibhokisi ehambelana nazo. Emva koko nqakraza kwi «Okulandelayo>» iqhosha.
4) Kwifestile evulayo, cofa ku "Faka" kwaye ufakelo luya kuqala. Xa igqibile, iwindow yokukhetha ulwimi iya kuvulwa. Khetha ulwimi olufunayo kwi-IZArk ngokuskrola ngebar ebonakala kwicala lasekunene lefestile. Xa ukhethe ulwimi cofa ku «Kulungile».
5) Emva kokucofa u "Kulungile", i "Khetha" iwindow iya kuvula ngokuzenzekelayo kulwimi olukhethiweyo, apho unokwenza utshintsho olwahlukeneyo kuseto lwenkqubo. Okwangoku siza kucofa nje ku "Yamkela" kwaye siya kuqhubeka nofakelo. Kwincwadana ehamba phambili endiza kuyilungiselela kungekudala, siza kubona ukuba zeziphi iindlela onokukhetha kuzo kunye nendlela yokumisela inkqubo.
6) Ifestile yokugqibela yofakelo iya kuvula, isazise ukuba ufakelo lwe-IZArc lugqityiwe. Sukukhangela ibhokisi "Jonga into eNtsha" ukuba awufuni ukufunda ifayile yokubhaliweyo ngophuculo olwenziweyo kwinkqubo (ngesiNgesi) kwaye ucofe ku "Gqiba" ukugqiba.
BEwe oku sele ukugqibile ukufakela esi siguquli sikhulu sisebenza njengeyona ndlela ifanelekileyo yasimahla yokufumana isiguquli seWinRAR. Kungenzeka ukuba xa ucofa kwindawo ethi "Qedela" kwiwindow yokugqibela, ibrawuza yakho ye-Intanethi iya kuvula kwaye idibane nayo icandelo ukusuka kwiphepha elisemthethweni le-IZArc apho bachaza khona, ngesiNgesi, indlela yokwenza umnikelo wokuzithandela kubadali be-IZArc. Yenza umnikelo ukuba uyafuna okanye uvale nje iwindow.
ENdiyathemba ukuba uza kufumana okuninzi kule nkqubo ngoncedo lwale ncwadana incinci, ndiza kugqibezela uqeqesho lwe uqwalaselo kunye nokusetyenziswa kwe-IZArc ukuze uthathe ithuba lokufumana onke amanqaku alesi siguquli sasimahla. Kude kube ngoko, imibuliso yomdiliya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » ICompressor-decompressor ye-IZArc. Uyifaka njani i-IZArc isinxibelelanisi sasimahla seefomathi ezininzi kwaye ulibale nge-WinRar
Inqaku elihle kakhulu kwaye ngaphezu kwayo yonke into eyenziweyo, indincedile ukuba ndithathe isigqibo sokufaka i-IZArc, sele ndiyizamile kwaye isebenza ngokumangalisayo.
Molo Marvin, enkosi ngamazwi akho kunye notyelelo lwakho. Iphepha elisekhohlo lelokwenza izizathu, iphepha lonke liyilelwe ngaphandle kweetafile (ngaphandle kweendawo ezimbalwa) kwaye ndiye ndaqala ukubambelela ngasekhohlo ngokulula xa ndibeka
. Ngokukhawuleza nje ukuba ndinexeshana ndilithumela embindini, kuba nam ndikhetha kuloo ndawo.
Umbuliso omuncu ngokukodwa.
Enkosi, umbulali wam endimthandayo. Kwakhona inkcazo efanelekileyo. Ndivumelana nawe: IZARC lukhetho oluhle kakhulu, londliwe kukuhlaziya i-zip okanye rar rhoqo.
Kwaye kuyo yonke le nto, kwaye kuba ndiyaqala ukubhala, ndiyavuyisana neli phulo lezemfundo. Ndinqwenela ukuba ndiyazile le webhsayithi phantse kunyaka ophelileyo, xa ndandiqala ukucinga nzulu ngekhompyuter kwaye ngakumbi ukungena kwi-Intanethi.Kunokuba luncedo kakhulu ukuba nomntu ongazi nje kuphela, kodwa ocacisa ngokucacileyo kwaye aphendule ngokugqibeleleyo imfundo. Chapeau.
Ngendlela, i-maniac endiyiyo, kutheni ukhethe ukubonisa iphepha elibethelelwe kwicala lasekhohlo kwaye ungagxili ngokuthe ngqo?
Umbuzo omnye nje, ngaba kufuneka ndiyikhuphe i-Winrar ukuze ndikhuphele i-Izarc? Enkosi kakhulu
Akukho papino, ungazifaka zombini kwaye usebenzise nganye nanini na xa ufuna.
Enkosi kumadoda, kodwa ngekhe uyenze yagcwalisa kancinane, andazi ukuba ndifihla njani, ndilungisa, kuvavanya iifayile ezixineneyo, amadoda abulisayo ...
Yonke into iza kufika ngexesha elifanelekileyo Queni 😉
hlaziya hdz sitsho
isikhokelo sendlela yokudibanisa ifayile kunye nolwandiso .gz indibuza ivolumu ye-id eyi-0 emva koko indibuze i-id yevolumu -1 ojsal ingandinceda….
Phendula rene hdz
Sihlobo, ingxaki onayo kukuba ulahlekile kwiifayile. Kude kube unazo zonke, ngekhe ukwazi ukuvula iziphu.
Molweni ngemibuliso yam. hei kufuneka ndiyikhuphele ngaphandle isiguquli sam esidala okanye yenza okufanayo?
Unokubakho zombini icompressors efakwe ngaxeshanye kwaye akukho nto yenzekayo. Kodwa ukuba ufuna ukuba inye kuphela, kuya kufuneka uyikhuphe enye ngokwakho.
Elinjani iphepha elilungileyo, bendingazange ndilifumane ngaphambili, ndiyacinga
Kuhle kakhulu vibes kuwe ukuba usazise kuthi, kwaye isuka-
Uncedo olukhulu kuba uyichaza ngendlela yokuba
iyaqondakala, ndiza kujonga kwizifundo zakho.
Molo, ndiyifakile le nkqubo uthi apha izarc kodwa xa ndikhuphela iimovie ezininzi kwifomathi yeRAR ayindivumeli ukuba ndibavule ngale nkqubo kwaye andazi ukuba kutheni ndifumana impazamo, ndizamile nge-4 Iifilimu ezahlukeneyo kwaye andinakukwazi ukuzidibanisa.Abanye abantu UKUBA isebenza kakuhle kubo kwaye bayayicofa kodwa nge-winrar.Ndicela undincede, undinike inyathelo ngenyathelo ngenyathelo lendlela icinezelwe ngayo okanye intlawulo yasimahla apho icaciswe ngcono.Ndicela undiphendule ngokukhawuleza.Ndibulela kakhulu
Ngaba uyandiva ukuba ndingayicofa njani ifayile kule nkqubo! ????
Enkosi, undincedile, ndiyathemba kwaye ungandinceda kwakhona
kuba abayicacisi inkqubo efanayo umz
Abdiel Gg sitsho
Molo, ndiyavuya xa ubeka eli phepha, ndilikhuphele nje kwaye ndiyathemba ukuba le decompressor kulula ukuyisebenzisa kune-win rar okanye i-win zip kuba andiziqondi
Phendula ku-abdiel Gg
Zizozidenge ukuziphakamisa, andizisanga nto ngayo kwaye ii icon aziphumi
I-psss iyinto engaqhelekanga ukuba umnatha ungayiqondanga indawo
kodwa umlo abawenzayo kodwa awuzange ukhululwe, abayisebenzisi ukwenza le nto kuwe
MHLALA !! Enkosi kakhulu !! inyathelo ngalinye liphezulu kakhulu kwaye liluncedo olukhulu !!! enkosi kakhulu caapo !!!
U-cruz hernandez r sitsho
Iviniga, yinkqubo elungileyo kodwa ukuba ndiyifakile i-winrar, ndivumelekile ukuyifaka okanye ndiza kuba nengxaki kwi-hard drive yam, Enkosi
Phendula kwi-cruz hernandez r
diskulpen ndinengxaki! Andikwazi ukuvula i-movie ehla kwiindawo ezi-8! indixelela ivolumu id 0! Ndingaluvuyela uncedo lwe-km !!